Indawo yokuhlala eNtofontofo kaDanel
Tuzla, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia & Herzegovina
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguLjubica
Indawo yokuhlala eNtofontofo iDanel yindlu entsha kraca kumgangatho woku-1 enazo zonke izinto onokuzifuna.
Iindwendwe zinokufikelela ngokulula kwindawo yokupaka yasimahla phambi kwesakhiwo. I-Apartment inegumbi lokuhlala elikhulu, ikhitshi, igumbi lokulala elikhulu kunye negumbi lokuhlambela.
I-Apartment ixhotyiswe nge-Wi-Fi yamahhala, i-air conditioner kunye nokufudumeza okuphakathi. Kwindlu yendlu uya kufumana iBhodi ye-ayina kunye ne-Ayina, isisomisi seenwele, iWashing / umatshini wokomisa.
Kwigumbi lokuhlala uya kufumana iTV yokubukela izitishi ozithandayo kunye neMiboniso yeTV okanye udweliswe kumculo ngelixa uphumle. Uya kufumana yonke into oyifunayo ekhitshini (i-induction cooker, i-microwave, iketile, ifriji, i-oveni, i-dishwasher), ukwenza isidlo sakho, ukuze uzive ngathi usekhaya. Amaphepha acocekileyo kunye neetawuli zikulindile eflethini
Kufuphi nefulethi kukho iKliniki yaBucala i-Alabajci (uGqirha wamazinyo, uGqirha wabantwana), iBakery, iSupermarket kunye neMarike. Kwakhona umgama wokuhamba yiHotele iTuzla kunye neHotele iMellain exhotyiswe ngamadama okuqubha, i-spa, indawo yokomelela, ikhasino, iindawo zokutyela kunye nevenkile yekofu.
Umbuki zindwendwe ngu- Ljubica
Ndihlala kwaye ndisebenza umzuzu omnye ngeenyawo ukusuka eflethini ukuze unditsalele umnxeba nangaliphi na ixesha ngexesha lokuhlala kwakho eTuzla kwaye ndingakuvuyela ukukunceda.